Njirimara nke iru mmiri ihu igwe ma ọ bụ ihu igwe China | Netwọk Mgbasa Ozi
Udiri ihu igwe nke ihu igwe ma ọ bụ ihu igwe China
Na ederede gara aga anyị na-enye nyocha nke dị iche iche ụdị ihu igwe na mkpa ịkọwa ụfọdụ n'ime ha na nkọwa zuru ezu site na nkwụsị. N'etiti nkọwa anyị na-ahụ ihu igwe Mediterranean, oke osimiri, wdg. Na nke a, anyị ga-elekwasị anya na ịkọwa ihe niile metụtara iru mmiri subtropical ihu igwe, a makwaara dị ka ihu igwe China. Ọ bụ ihu igwe a na-ahụkarị ya na mpaghara ọwụwa anyanwụ niile nke ejiri oge okpomọkụ na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ ma e jiri ya tụnyere oke oyi.
Youchọrọ ịma njirimara niile na mkpa nke ihu igwe na-ekpo ọkụ? Nọgide na-agụ n’ihi na anyị na-akọwa ihe niile ebe a.
2 Mmetụta Monsoon
4 Nkesa na ihe egwu di njo
Isdị ihu igwe a na-ahụkarị site na ịdị adị nke oge okpomọkụ na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ, na, na ntụle, ezigbo oge oyi. A na-ahụkarị ugwu ndị a na mpaghara kọntinent nke ndịda ọwụwa anyanwụ nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mpaghara niile ahụ dị na latitude n'etiti ogo 25 na 35.
A na-ekesa mmiri ozuzo n'ime afọ niile ma bụrụ mgbe niile. Banyere okpomọkụ, ha na-adịkarị elu n'oge ọkọchị ma na-ajụkarị oyi n'oge oyi. Humdị iru mmiri nke ihu igwe a bụ n'ihi n'eziokwu na mpaghara ebe ọ na-adị n'okpuru mmetụta nke ikuku ụgbọ mmiri. Ọnọdụ okpomọkụ dị elu na ọnwa na-ekpo ọkụ, na-eru nkezi okpomọkụ nke 27 degrees. E debere elu ụbọchị kwa ihe dị ka ogo 30 ruo 38. Abalị ndị a na-enwe n’oge okpomọkụ bụkwa n’ozuzu ha.
Oge okpomọkụ na-abụkarị iru mmiri karịa oge oyi. A na-enye mmiri mmiri nke sitere na mmiri n'okpuru oke osimiri. Igwe ikuku na-ekpo ọkụ juputara na mpaghara ndị a, na-eme ka mmiri ozuzo na oge ọkụ. Nke a bụ ihe kpatara eji ekewa mmiri ozuzo n’afọ niile. Enweghị oge ọkọchị.
Onye na-ajụkarị oyi na-adịkarịkarị nwayọọ na ọnọdụ dị n’etiti ogo 5 na 12. Ọ bụghị ihe a na-ahụkarị maka ntu oyi. Mmiri na-ezo n'oge oge oyi bụ site na ajọ ifufe nke na-eme n'ihu polar.
Na North America, polar n'ihu na-amalite nloghachi ya na mgbago ugwu n'oge opupu ihe ubi na oge ọkọchị. Ya mere, oke ikuku nke metụtara oke ifufe dị ọtụtụ karịa. Ihe dị iche n’etiti ikuku na ebe okpomọkụ bụ na ọ na-ebute oke ikuku ndị ahụ niile.
Mmetụta udu mmiri na mpaghara ndị a ebe anyị nwere ihu igwe na-ekpo ọkụ ma ọ bụ ihu igwe China bụ n'ihi mgbanwe. Ọ bụ a kọwaa drier oyi n'ihi nkewa nke ikuku na-etolite Siberia anticyclone na polar n'ihu. Okporo ụzọ cyclonic dị na mpaghara a bụ ọrụ maka ibugharị mmiri ozuzo a.
Oge ọkọchị na udu mmiri na udu mmiri na-ekpokarị oke. Na ihu igwe a anyị nwere ike ịnwe anwụ n’afọ n’afọ. Imirikiti ihu igwe mmiri dị ala dị na mpaghara ndị dị n'ụsọ oké osimiri, ma e nwere ụfọdụ ebe ha na-eme n'ime ime. Dịka ọmụmaatụ, n'akụkụ ụfọdụ nke United States na China. N'ihi nke a, a na-akpọkwa ihu igwe na-ajụkarị oyi dị ka ihu igwe ndị China.
A na-enwe ike ịnwe ihe ubi ọrụ ubi n'ihi ọnọdụ ihu igwe a. Oge na-eto eto na-ewe ọnwa 8 ma mee ka ogo nke kụrụ dị mma.
Ahịhịa ndị dị na mpaghara ihu igwe a bụ nke nwere osisi na-adịghị epupụta na-akwadebe maka iru mmiri dị elu na osisi ndị yiri ya. Mmiri ozuzo na okpomọkụ mgbe niile bụ ihe na-ekpebi na epupụta bụ nke na-adịgide adịgide. Anyị nwere ike ịchọta ọtụtụ ụdị nkwụ na fern na-ahụkarị mpaghara ndị a.
Otu ihe atụ nke ihu igwe na-ekpo ọkụ nke ihu igwe bụ Osimiri Osimiri India. Ọ dị n'ụsọ oké osimiri Atlantic nke Florida. N'ihi ịdị adị nke ihu igwe a, ọ bụ ebe dịgasị iche iche na ndụ nke ihe karịrị ụdị osisi 2.100 na anụmanụ 2.200.
Ka anyị gafere na anụmanụ ndị anyị na-ahụ ihu igwe. Characteristicdị njirimara nke ebe ndị a ọ zuru oke maka ịmepụta ebe obibi okike nke ụfọdụ mammals, amphibians na ihe nākpu akpu. N'ime anụmanụ ndị a, anyị na-ahụ mgbada, agụ iyi America na akukị. Ebe ọ bụ na agụ iyi, dị ka mbe, bụ anụmanụ nwere ọbara oyi, okpomọkụ dị na mbara igwe na-eme ka ha maa mma.
Ebe obibi a na-akpụ ekele maka ihu igwe a na-eme ka o doo anya na ọtụtụ ụdị agụ iyi nwere ike zoo nke ọma na ahịhịa dị ugbu a ịchụ nta anụ ha. Nnụnụ nwere ike ịchọta ezigbo ebe obibi na ebe obibi obibi. Ha nwekwara ohere di uku maka ichu nta.
Nkesa na ihe egwu di njo
Ihu igwe a dị n'ọtụtụ ebe gburugburu ụwa. A maara ya dị ka ihu igwe China n'ihi na ọ dị n'ọtụtụ akụkụ nke kọntinent Eshia ebe nnukwu akụkụ nke ụwa bi. Ma enwerekwa ebe ndị ọzọ n'ụwa. Dịka ọmụmaatụ, anyị na-achọta ya na mpaghara abụọ nke akụkụ ndịda Africa, na mba dịka Angola, ndịda ọwụwa anyanwụ Tanzania, mpaghara nke Zambia na Malawi, Tete, Manica, na ugwu ọwụwa anyanwụ Zimbabwe.
N'ebe ndị ọzọ anyị nwekwara ike ịchọta ya dị ka ha dị na ugwu ugwu Etiopia. Na Asia, anyị nwere ike ịchọta ya na mpaghara ọwụwa anyanwụ na ndịda ọwụwa anyanwụ, na ndịda Eshia na ọdịda anyanwụ Asia. Ebe a maara ya dị ka ihu igwe ndị China. Agbanyeghi na oke pere mpe, anyị nwekwara ike ịchọta ya na Central Europe, ebe ugwu Italy na ụsọ Oké Osimiri Ojii na Bulgaria.
Banyere ihe ize ndụ ndị a na ụdị idụhe nwere ike ime ka ruru ya e ji mara na e guzobere oké ifufe. Ọnụnọ nke ikuku nke okpomọkụ dị iche iche na nsogbu na ọdịiche dị n’etiti ha pụtara na mpaghara ebe ihu igwe dị n'okpuru ala na-ata ahụhụ site na oke oke ifufe na-akpata oke mbibi nye ngwaahịa na ndị mmadụ.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere iru mmiri subtropical ihu igwe na ebe enwere ike ịchọta ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Climatology » Udiri ihu igwe nke ihu igwe ma ọ bụ ihu igwe China
Ebe anyanwụ na-awa